GNOME 41 inouya neiri nani software chitoro | Linux Vakapindwa muropa
Inenge mwedzi mitanhatu yapfuura, chirongwa chiri kuseri kwedhesiki chinoshandiswa neshanduro huru dzekugoverwa senge Ubuntu kana Fedora yakatipa chimwe chinhu chakakura. Ndiri kutaura nezve iyo GNOME 40 yakaunza shanduko hombe, senge doko pazasi kana zviito zvekuisa zviitiko kana dhirowa rekushandisa. Nhasi, chirongwa chakatangwa GNOME 41, uye hazvirevi kuti kuvhura kusingakoshe, asi, zvine musoro, hakukwezvi kutarisisa kwakanyanya.
Mushure memwedzi mumwe chete mumiyedzo, GNOME 41 yakaziviswa pamwe nedzimwe shanduko dzinoenderera nenzira yakatanga mwedzi mitanhatu yapfuura, zvakanyanya kana tichiverenga nguva yekusimudzira, pakati payo patine shanduko munzira dzemaneja emagetsi kana iyo vhezheni itsva yesoftware centre. Pazasi iwe une pfupiso yenhau dzakakurumbira dzakasvika neGNOME 41.
1 Pfungwa dzeGNOME 41
Pfungwa dzeGNOME 41
Iyo nzira yemagetsi yakagadziridzwa, uye ikozvino inogona kuchinjwa nekukurumidza kubva kuhurongwa hwemamiriro ehurongwa. Kuchengetedza modhi kwakagadziridzwa uye ikozvino kupenya kunodzikira nekukurumidza kana uchishanda. Uye zvakare, iyo mamiriro ehupfumi anozovhurwa otomatiki kana bhatiri danho radzikira.
Inoenderana nemagetsi modes, GNOME 41 yatanga rutsigiro rwezvikumbiro kukumbira imwe nzira.
GNOME Software yakagamuchira shanduko dzakadai se:
Iko kuvandudzwa kwekutsvaga kwekutarisa kunoita kuti zvive nyore kufamba uye kutsvaga mashandisirwo, iine tsananguro dzinoyevedza dzechimwe nechimwe chikumbiro nematiles.
Seti nyowani yezvikamu inobatsira kufamba uye kuongorora zviripo zvinoshandiswa.
Iwo mapeji ehunyanzvi akagadziriswazve, aine makuru ma skrini uye matipi matsva eruzivo, achipa tarisiro iri nani yesarudzo yega yega.
Yakawanda polished dhizaini yakazara.
Multitasking marongero, ayo anotendera:
Bvisa iyo "inopisa" kona yeZviitiko.
Dzima mitezo inoshanda yechidzitiro.
Gadza yakatarwa nhamba yenzvimbo dzebasa.
Ratidza nzvimbo dzekushandira pane ese skrini, panzvimbo pechingori chikuru skrini.
Chengetedza chinongedzo chekushandisa kunzvimbo yazvino yebasa, kana uchishandisa nzira pfupi yekhibhodi Super + Tab.
New Connections application, iri kure chikamu mutengi. Inotsigira VNC uye RDP.
Yakanangana nezviri pamusoro, Mabhokisi acharasikirwa neiyi sarudzo.
Mimhanzi yakagamuchira zvigadzirwa zvekuona.
Kugona kugadzira yakavharidzirwa .zip mafaera mu Archives (izvi zvinoda password kuvhura).
Nyowani Calendari ficha iyo inokutendera iwe kuendesa zviitiko kubva ku .ics mafaera.
Rutsigiro rwakagadziridzwa rwemamiriro erima pawebhu, pamwe nekukurumidza kunamira kuti usvitse (pane anorema mawebhusaiti), uye kubata kuri nani kwemawebhusaiti asingateereri.
Yakavandudzwa hwindo rekushandura mu Calculator: kuwedzera hwindo kunoratidza mamwe maratidziro, uye hwindo rinodzikirawo kuti riwane mafoni mascreen.
GNOME 41 zvaziviswa maminetsi mashoma apfuura, zvinoreva kuti yatove kuwanikwa kune vanogadzira kuwedzera kune akasiyana maLinux kugoverwa. Ivo vanozotanga kuitambira ivo ndevaya vanoshandisa iyo Rolling Release modhi yekuvandudza, uye gare gare ichauya kune vamwe vakaita saFedora. Izvo hazvina kusimbiswa, asi izvo zvichangoitika runyerekupe zvinoti ndiyo ichave yakajeka nzvimbo iyo Ubuntu 21.10 Impish Indri ichashandisa. Ndiani anofarira kurodha pasi kodhi, inowanikwa pano.
Mifananidzo: Purojekiti GNOME.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GNOME 41 inouya neiri nani chitoro chesoftware, matsva emagetsi sarudzo, uye zvimwe shanduko
Andrew Suarez akadaro
WOWOWOW NDAKAIEDZA PANE ARCH LINUX KUNYANYA KUNYANYA KUNYANYA, KUNYANYA KUNYANYA KUNA GENOME 3.38 NEGNOME 40, ndinofarawo nezve kuita-kwakaringana-simba-yekuponesa maitiro maitiro, iyi vhezheni iri nani nani kupfuura iyo gnome 40.
Pindura Andres Suarez
ady miranda akadaro
Ini ndinoda maitiro ekuita, inochengetedza simba uye yakaenzana iyo gnome 41 yaisanganisira, zvakare ndakaona kuti mutter ine yakaderera CPU yekushandisa uye ine zvirinani kuita, zvinoenderana nekuenzanisa kwandakaita kugunun'una mune gnome 40, inopedza pane chimwe chinhu mumakomputa ekare. 39%, nepo iri gnome 41 inoshandisa 25% cpu, iri pasi pe14% iyo inokosheswa, iniwo ndakaita bvunzo nebhatiri randinaro mune ino 2014 laptop yakandipedza maawa matanhatu nehafu mune gnome 40 (It yakagara kwenguva yakareba asi ndinoshandisa gore rimwechete) uye neine gnome 6 inogara maawa manomwe nemaminitsi gumi, izvo zvinosvika pamaminetsi makumi mana, uye ichokwadi, nekuda kwekushandisa kwakaderera kwemawati ane gnome 1 ikozvino, ndatenda kuzvikwata zvevanogadzira gnome, yekundipa vhezheni yakadai uye ndinovimba inoramba yakadaro.
Pindura Ady miranda
Edward Perez akadaro
Iyo yakaderera bhatiri kunwa iyo gnome 41 ine isingadaviriki, inotora 38-40 maminetsi kureba. Zvinonakidza kuti zvinhu zviri kuitwa mushe.
Pindura Eduardo Perez
roberto ronquillo akadaro
lol iyi gnome inoshamisa 31
Pindura kuna roberto ronquillo
Linux pa ... IndyCar uye iyo Indianapolis 500?